Smartphones na-anya isi nke batrị na price | Akụkọ akụrụngwa
Zụta ngwaọrụ mkpanaaka taa bụ ọrụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya na ọ bụ ya ọnụ ọgụgụ nke smartphones dị na ahịa adịghị agwụ agwụ ma na-eto eto kwa ụbọchị. Offọdụ n'ime akụkụ nke ndị ọrụ na-ejikarị edozi mgbe ha na-ahọrọ ọnụ ọgụgụ ọhụrụ ha bụ ọnụahịa ahụ nakwa na ha nwere batrị dị mma nke na-enye ha ohere iji ya na-enweghị ọtụtụ nlezianya. Na mgbakwunye, ọtụtụ n'ime unu na-ajụ anyị mgbe niile ma ọ bụrụ na ọ ga - emeri ụbọchị nnwere onwe, ihe ọtụtụ ndị na - enweghị ike iji nweta ya.
Taa na ime ka ndụ gị dịtụ mfe anyị kpebiri ịmepụta obere ndepụta nke anyị ga-egosi gị 5 smartphones nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, na ọnụahịa dị mma yana nnukwu batrị nke ga - eme ka inwee ọhụụ n’obere ekwentị gị ụbọchị ta ọbụlagodi obere oge.
Tupu ịmalite anyị chọrọ ịkọwapụta na ọnụahịa ị ga-ahụ n'isiokwu a, anyị ahụla ọnụahịa dị mma, mana ọ bụrụ na maka mmefu ego ha, ha nwere oke oke ị nwere ike ilele isiokwu ahụ "7 smartphones ị nwere ike ịzụta maka ihe na-erughị 100 euro" na anyị bipụtara ụbọchị gara aga na nke ahụ ga-enyere gị aka nke ukwuu.
1 Xiaomi Redmi Rịba ama 4G
2 Meizu M2 Rịba ama
3 Na-asọpụrụ 4X
5 Huawei ọdọk G7
Xiaomi Redmi Rịba ama 4G
Xiaomi Ebe ọ bụ na ya inception na mobile telephony ahịa, ọ e ji àjà ndị ọrụ mobile ngwaọrụ na nnọọ asọmpi ahịa na-na ihe karịrị ịrịba ama nkọwa. Ihe omuma atu doro anya nke a bu nke a Xiaomi Redmi Rịba ama 4G nke ahụ agaghị ahapụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-enweghị afọ ojuju na mkpuchi zuru ezu.
Ọzọ, anyị ga-enyocha njirimara ya na nkọwa ya;
Akụkụ: 154 x 78.7 x 9.5 mm
5,5? IPS ihuenyo (1280 x 720 pikselụ)
Processor: Qualcomm Snapdragon 400 na 1.6GHz (MSM8928)
Igwefoto azụ 13MP nwere Flash Flash, f / 2.2 na ndekọ 1080p
8GB nke ebe nchekwa dị n'ime ahụ nwere ike ịgbasa site na kaadị micro SD ruo 64GB
4G LTE (TD-LTE na FDD-LTE nsụgharị), WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0 na GPS
Android 4.2 sistemụ arụmọrụ na oyi akwa MIUI v5
Batrị ya dị ka ị na-echeworị otu n'ime ike ya, nke ahụ bụ na n'agbanyeghị na ọ "naanị" ruru 3.100 mAh, ọ ga-enye anyị nnwere onwe karia ihe. nke ahụ ga-eme kwa ụbọchị. Ọnụ ya bụ isi okwu ọzọ dị ike nke ọnụ ahịa a nke ndị na-emepụta China na nke ahụ bụ na anyị nwere ike ịzụta ya naanị euro 139.
Nwere ike ịzụta Xiaomi Redmi Rịba ama 4G site na Amazon Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Meizu M2 Rịba ama
Meizu bụ otu n'ime ndị na-emepụta China na n'oge na-adịbeghị anya na-achịkwa iji nweta ọnọdụ na ahịa ekwentị mkpanaka, ma na-eme nke ahụ site na ịmalite ekwentị dị mma ma dị ike.
El Meizu M2 Rịba ama Na taa anyị na-egosi gị bụ otu n'ime ha na nke ahụ bụ na maka naanị n'okpuru 200 euro anyị nwere ike ịnweta ọnụahịa nwere ihe karịrị njirimara na nkọwa na-adọrọ mmasị, usoro dị mma ma na-atọ ọchị. N'ezie ọ nwekwara batrị nke na-agaghị achọpụta na nnwere onwe dị ogologo nke 3.100 mAh.
Ndị a bụ nkọwa ndị bụ isi nke Meizu M2 Cheta;
Akụkụ: 150,9 x 75.2 x 8.7 mm
5,5 anụ ọhịa IPS ihuenyo. 1080-by-1920 mkpebi
Processor: Mediatek MT6753 octa-isi 1,3 Ghz mgbawa
Ese foto: igwefoto 13 megapixel isi. F / 2.2 oghere. 5 megapixel n'ihu, oghere f / 2.0.
Samsung CMOS sensọ.
16 0 32 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa site na kaadị microSD
Batrị: 3.100 mAh
Ndị ọzọ data: Dual SIM
Nwere ike ịzụta Meizu M2 Rịba ama site na Amazon HERE.
Sọpụrụ, ụlọ ọrụ Huawei jisiri iju ọtụtụ ndị ọrụ anya na ya smartphones, dị ala na ọnụahịa mana na nkọwa ndị kwesịrị igosi ọnụahịa dị elu.
Ihe a na-asọpụrụ 4X bụ phablet dị ike, nke na-adịghị agbaso ụkpụrụ nhazi nke Honor 6 ma ọ bụ Honor 6 Plus, mana ọ nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka ndị niile na-achọ ọnụ na nnukwu ihuenyo na ọchịchị obodo nke na-enye anyị ohere rute na njedebe nke ubochi n’enweghi nsogbu obula.
Ndị a bụ isi atụmatụ na nkọwa nke Honor 4X;
Akụkụ: 152.9 x 77.2 x 8.65 mm
5,5 anụ ọhịa IPS ihuenyo na 1280 x 720 pixel mkpebi
Processor: Kirin 620 octa core 1,2 Ghz Cortex A53 na 64-bit ije
13MP n'azụ igwefoto na 5MP n'ihu igwefoto
8GB nke nchekwa dị n'ime, gbasaa site na microSD
Dual SIM na 4G
Android 4.4 sistemụ arụmọrụ na EMUI 3.0 nhazi akwa
Na echiche ọ na-anọgide na anyị na-eche ihu ọnụahịa karịrị nke na-adọrọ mmasị anyị nwere ike inweta maka ọnụ ahịa na-atọ ụtọ. Anyị nwekwara ike ịgwa gị na nsọpụrụ ọ bụla nwere ike ịbụ nhọrọ ebe ọtụtụ nwere ọnụ ala dị ala na nnwere onwe dị ukwuu.
Nwere ike ịzụta Honor 4X site na Amazon HERE.
Anyị niile na-atụ anya na anyị nwere ike inwe smartphone nwere nnukwu batrị nke ga-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, ịghara ịkwụ ụgwọ ya ụbọchị ole na ole. Nrọ ahụ bụ eziokwu ugbu a na ya ASUS Zenfone Max nke ahụ ga-enye anyị a batrị nke ihe ọ bụla ọzọ na ọ dịghị ihe na-erughị 5.000 mAh.
Anyị enwebeghị ike ịhụ ọnụ ọgụgụ gọọmentị nke nnwere onwe nke ọ ga-enye anyị, nke ga-abụ nnukwu, mana ozugbo ọ na-ere ahịa na Ọktọba anyị ga-eme ka ha nye gị ha wee hụ ma ọ bụ bara uru ịzụta ama a na mkpụrụ obi nke ụlọ akụ ike.
Ihe ndị a bụ isi atụmatụ na nkọwa anyị maaraworị banyere ASUS Zenfone Max a;
5.5-inch ihuenyo na ozodimgba iko 4 nchedo
8 ma ọ bụ 16 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa ruo 128 GB na kaadị microSD
13 megapixel n'azụ igwefoto na f / 2.0, Real ụda flash na Auto Lekwasịrị Anya laser
5-megapixel igwefoto n'ihu na f / 2.0 na 85-degree wide-angle lens
Ndị ọzọ: 4G LTE / 3G HSPA +, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS
Android 5.0 Lollipop sistemụ arụmọrụ na Zen UI 2.0
A maghị ọnụahịa ya n'oge a, ọ bụ ezie na a ga-atụ anya na ọ gaghị adị oke elu iji kpalie mmasị karịa n'ahịa. A ga - enwekwa ụdị adịgboroja kachasị elu nke nwere atụmatụ nwere iji nlezianya rụchaa, anyị chere na ọ nwere ọnụahịa dị elu karịa ụdị nke kachasị. N'ọnwa Ọktọba mgbe ASUS na-ere ahịa, anyị ga-enwe ike ikpochapụ obi abụọ niile ma nwalee ya n'ụzọ miri emi.
Huawei ọdọk G7
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị enyochala Huawei Ascend G7 que Ọtụtụ ihe juru anyị anya nke ukwuu, mana karịa ihe niile site na nhazi ya na ọchịchị obodo nke ahụ na-enye. Ọnụ ya bụkwa ihe ọzọ na-esi ike na njedebe a, n'agbanyeghị agbanyeghị na ọ dị n'ahịa ruo oge ụfọdụ, na-aga n'ihu na-enwe ọnụ ọgụgụ ahịa dị mma.
N'okpuru ị nwere ike ịhụ nkọwa niile nke Huawei Ascend G7;
Akụkụ: 153.5 x 77.3 x 7.6 mm
Arọ: gram 165
5.5 nke anụ ọhịa ahụ HD ihuenyo
Processor: Quad Core ARM Cortex A53 na 1.2GHz
16GB nke nchekwa dị n'ime
13MP F2.0 azụ igwefoto / 5MP n'ihu
Nkwado 4G LTE
Android 4.4 KitKat + Mmetụta UI sistemụ arụmọrụ
Dị ka anyị kwurula, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ ama ama dị n'ahịa ruo oge ụfọdụ, ọ naghị ewepụ ụfọdụ n'ime akwụkwọ ọhụrụ ndị na-eru ahịa ahụ. Ọzọkwa olile anya anyị nwere ike ịzụta ya maka ọnụahịa karịa ihe na-atọ ụtọ.
Ọzọkwa anyị ga-ekwusi ike na Huawei nwere katalọgụ nke ngwaọrụ mkpanaka na ahịa, ọtụtụ n'ime ha na-ezute njirimara nke ọnụahịa dị mma na nnwere onwe. Ọ BR Huawei na nke a Huawei Ascend G7 anaghị eme ka ị kwenye ma ọlị, ikekwe ọdụ ọzọ sitere n'aka onye nrụpụta China nwere ike ịkwenye gị.
Nwere ike ịzụta Huawei Ascend G7 site na Amazon HERE.
Ndị a bụ 5 smartphones anyị họọrọ taa maka ndepụta a nke ogige kachasị mkpa bụ nnwere onwe na ọnụahịa. N'ezie, enwere ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na-ezute ha, mana enweghị ohere maka onye ọ bụla ma anyị achọghị ka ndepụta ahụ ghara ịdị agwụ agwụ. N'ezie, anyị achọghị ịhapụ ohere maka ka ị chee nke bụ ihe kachasị amasị gị na ekwentị ndị anyị nyere gị yana karịa ịkọrọ anyị nhọrọ ndị ọzọ ị maara n'ahịa.
You chere na ọnụahịa na nnwere onwe bụ akụkụ abụọ dị mkpa nke smartphone kwesịrị ịnwe?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » 5 ufọt ufọt nso smartphones na-etu ọnụ nke batrị na price